माध्यमिक तहकी छोरीको स्नातकोत्तर पितालाई पत्र - News Today
in: विचार, साहित्य
अब म पनि सुझबुझसहितकी भएँ । सोचसमझको विकास हुँदै गएको अनुभूत हुँदै छ । कताकता मेरो ज्ञानको क्षितिज थुन्ने आफ्नै आफन्त भएको महसुस हुँदै छ । र, यत्तिखेर पत्र कोर्न वाध्य भएकी छु । यसलाई सकारात्मकरूपमा लिएर मेरो स्वच्छन्दताको मार्ग अझ सफा पार्न सहयोग गर्नुहुने छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु ।
मेरो बालमनस्थितिमा वात्सल्यप्रेमको आभाष छँदै छ । निःसन्देह म हजुरहरूकै काखमा हुर्केँ । तिनै औँलाका सहयोगमा बामे सर्न र इसारामा नाच्न सिकेँ । तिनै बोलीका भरमा सतर्कता भेट्टाएँ । होस गुमाउँदा पाएको ठक्करबाट चेतनाको दैलो उघारेँ । र, पनि साँच्चै बुबा ! त्यसबेला आफूलाई चार दिवालभित्रको एक कैदी सम्झिन्थेँ ।
त्यसबेला मलाई खुला आकाशमा चराहरूझैँ उड्न मन लाग्थ्यो । लमतन्न फैलिएको सडकमा निर्वाध गुडिहिँड्ने गाडीझैँ गुड्ने मन हुन्थ्यो । आफू खुशी उफ्रिरहेका र लुकामारी खेलिरहेका खरायाका बच्चाहरूसँग मितेरी साइनो गाँस्ने मन हुन्थ्यो । दलिनमा गँुड बनाएर बस्ने र यताउती चिर्बिर गरिहिँड्ने भँगेराभँगेरीझैँ जथाभावी बकबक गर्दै दगुर्ने मन हुन्थ्यो । साँच्चै पिताजी ! मलाई मेरो उन्मत्त संसार कसैले नखलबल्याई देओस् भन्ने लाग्थ्यो ।
दुर्भाग्य ! त्यस बेला मेरा लागि हजुरको न्यानो काख नै वाधक थियो । यसो केही कुरामा तलमाथि भयो कि जहिले पनि ठडिइहाल्ने त्यो चोर आँैलाको खबरदारीेंसँग शत्रुता थियो । त्यसबेलाको तपाईंको बोली युद्ध मैदानको रावणस्वर हुन्थ्यो । म जति होस गुमाई पछारिन्थेँ, त्यत्ति नै आनन्दानुभूति मिल्थ्यो । साँच्चै पिताजी ! मन खोल्न नपाउँदा आफूलाई अन्धकार भविष्यको अभिशापझैँ लाग्थ्यो ।
अहिले मेरो उमेर छिप्पिँदै गएको छ । मेरो मनमा थरिथरीका सपनाहरू तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । रङ्गिन दुनियाँ देखेर मन पुलकित भएको छ । संसार आफ्नो पक्षमा एकोहो¥याउने आँट जन्मेको छ । तर पिताजी ! मलाई हजुरको लाडप्यारले सताइरहेछ । हजुरभित्रको प्रतिष्ठा कमाउने धुनले मेरो मन रुवाइरहेछ ।
एकदिनको कुरा हो– हडतालकारीले दुई घण्टी वित्दा नवित्दै स्कूल बन्द गराए । म समयभन्दा अघि नै घर पुगेको हजुरलाई पत्तै थिएन । एकोहोरो आमालाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो– ‘हाम्री छोरी बढी । इज्जत राख्ने÷नास्ने उमेरकी भई । अझ कडाईका साथ नियन्त्रणमा राख्ने बेला सँघारमै आयो । नत्रभने यत्तिञ्जेल कमाएको प्रतिष्ठा माटोमा नै मिल्ने भयो । परम्पराविरुद्ध एक कदम पनि अघि बढी भने स्वर्गवासी पितृले के भन्लान् ? यसलाई धेरै पढाउनु एउटा गल्ती हुन्छ । अझ आफूसँगै राखेर आफ्नो इज्जतलाई दाउमा राखी उमेर छिप्पिन दिनु अर्को गल्ती हुन्छ । विद्यालय तहमै पढ्दापढ्दै गरेको अवस्थामा नै जतिसक्दो चाँडो उत्तम वर खोजेर बाटो लगाइदिनु नै बुद्धिमानी हुने छ । जे गर्छे, उत्तै गर्छे । यो नासोलाई पन्छाउँदैमा हाम्रो कल्याण हुन्छ । ज्वाइँ नारानलाई छोरीको मन राखेर काम गर्न सम्झाई दिनुपर्छ । ल प्रतिमाकी आमा ! छोरीको झ्याइकुटी चाँडै गरिदिनुपर्छ ।’
संवाद सुन्नासाथ मलाई हजार भोल्टको झड्का लाग्यो । म किंकर्तव्यविमूढ भएँ । आफ्नो सयनकक्षमा पुगेर भक्कानिएँ । बिद्रोहको राँको उठिरहेको थियो । त्यसलाई सल्काउनै लागेकी थिएँ । आफ्नै जन्मदाताको विरुद्धमा तत्कालै विस्फोटक निर्णय लिनु ठीक होइन भन्ने मन सक्रिय भयो । र, म सन्तुलित अवस्थामा आउने प्रयत्नमा लागेँ । यस बीचमा विद्यालय बन्दको भएको दुई महिना वितिसक्यो । एसएलसी परीक्षा पनि मुखैमा आएको छ । कसरी यो फलामे काँडेघारी छिचोल्नु भन्ने पिरलो छ । तसर्थ मैले त्यस संवादको प्रतिकार गर्न समय पाएकी थिइन । यस पटक भने पत्रमार्फत् नै मनको चाहना खुलासा गर्दै छु । यसलाई आफ्नी छोरीको इच्छा, विवेक र समझ ठानी स्विकार्नु होला ।
हेर्नुस् पिताजी ! जसले जन्मायो, हुर्कायो, बढायो र पढायो, त्यसलाई त आफ्नी छोरीको मन छाम्ने सामथ्र्य छैन भने खोजेर जिम्मा लगाइदिएको ठिटाको के कुरा गर्नु ? उसका पनि अनेकन वाध्यता र कठिनाई हँुदा हुन् । अर्काकी छोरीको हर इच्छालाई शिरोधार्य गरेर हिँड्ने वाध्यता उसलाई नहुँदो हो । हाम्रो समाजमा बिहे गरेर पढाउने संस्कार र भावनाले मूर्तरूप पाइसकेको छैन । कोहीकोही ठूला मन भएकाहरूले जेजस्तो गरे सबैले गर्दैनन् । फेरि म अर्काको घरमा गएर उनीहरूकै खुट्टामा टेकी बुहार्तन सहन सक्दिनँ । म आफूले आर्जन गरेको ज्ञानको सदुपयोगबाट आफ्नो संसार आफैं बनाउन चाहन्छु । कसैको आशमा बाँचेर म ऋणी बन्न चाहन्न । फेरि पिताजी ! आफ्नो कर्तव्य अरूमा सार्न किमार्थ मिल्दैन । सके आफैंले समाधान गर्नुपर्छ । नसके परिवारमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । तर, सन्तानको अग्रगतिको मार्गमा वाधक बनेर तेर्सिने अधिकार कुनै अभिभावकलाई छैन ।
अहिलेसम्म हजुरले परिवर्तन आफ्ना लागि मात्र भएको ठान्नुभएको रहेछ । परिवर्तन सबैका लागि एकनास भइरहेछ । अझ कलिलो उमेरको व्यक्तिको लागि त समय पनि लम्पसार परेर प्रतिक्षारत् छ । त्यो नयाँ मान्छेलाई स्वागत गर्न तम्तयार छ । म यस युगकी नयाँ मान्छे हुँ । मलाई जीवन पढ्न दिनुस् । इलम सिक्ने अवसर दिनुस् । संसारको जग ठम्याउन चाहन्छु । भताभुङ्ग भएको समाजको कुरुप पाटो पत्ता लगाई त्यसको मर्मत गरी सुन्दर समाज बनाउन चाहन्छु । समग्रमा म आफ्नो जीवनरथको सारथि स्वयम् बन्न लालायित छु ।
हेर्नुस् त पिताजी ! हाम्रै गाउँ–पाखा, उकाली–ओरालीहरूमा हस्याङ्फस्याङ गर्दै कर्मपथमा अहोरात्र डटेर खट्ने ओनसरी घर्ती र विद्यादेवी भण्डारी पनि नारी नै हुन् । उमेरले काँचा भए पनि अनुभवले पाका छन् । आजसम्मको इतिहासमा नेतृत्व तहमा नपुगेका स्थानमा पुगेका छन् । म पनि एक कर्मठ नारी हुँ । मसँग पनि अगाडि पुग्ने तागत विद्यमान छ । अरूको खुट्टा बन्न सक्छु, सक्दिनँ त्यो भन्न सक्दिनँ । तर, आफ्नो लागि भने सक्षम खुट्टा तयार पारी उभिएर छाड्छु । अहिले म अपाङ्गको अवस्थामा छु । अहिले मलाई पन्छाउने हैन पहिलेकोझैं न्यानो छहारी दिनुस् । मात्र केही वर्ष अझ धैर्य गर्नुस् । म पनि हजुरको लगानी त्यत्तिकै खेर जान दिन्न । एक असल छोरीको कर्तव्य पूरा गरी अभिभावकको शिर उच्च पार्ने बाचा गर्दछु ।
पिताजी ! अन्तमा हजुरलाई साह्रै सकस परेको छ भने मलाई घरायसी कामकाजबाट छुट्टी दिनुस् । आफूलाई चाहिने खर्चको जोहो गर्ने ज्ञान मसँग पर्याप्त छ । फुर्सदको समयमा गाउँभरिका बालबच्चा भेला पारेर लेखपढ गर्न सिकाउँछु । आफ्नो ज्ञानको लगानी तिनीहरूमै गर्छु । यसबाट अर्थोपार्जन पनि हुन्छ । र, समाजसेवामा योगदान गरेको समेत ठहरिन्छ । अर्कातिर आर्जित ज्ञान व्यवहारमा उपयोग पनि हुन्छ । सिकेको ज्ञानलाई दीर्घकालीन÷चीरस्थायी बनाउने अवसर पनि मिल्छ । मेरा यी विचार र बुझाइ सूर्यलाई बत्ती देखाए सरह भए । तर, मैले अभिव्यक्त नगरी भएको थिएन । अब भने मैले अरू केही भन्नुछैन । निर्णय हजुरको हातमा सुम्पदै पत्रान्त गर्दछु । धन्यवाद !
–शिक्षक, श्री महावीर मावि, विषहरिया–४,
Previous : सिम्राहा–सिंगियोनमा स्वराज जागरण अभियान
Next : सप्तरीको भारदह र रुपनीमा गोली चल्यो, दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यू, दर्जनौ घाइते, अहिले पनि झडप जारी